China RCL-3620 Back-nitaingina LED Linear Light orinasa sy mpanamboatra | lafo vidy
Karazana: jiro amin'ny lafiny iray: RCL-3620/1
jiro roa lafiny: RCL-3620/2
Ohatra fampiasana: apetaho amin'ny tabilao misy laminate ≥36mm
3620 andian-dahatsoratra manome hazavana kanto sy mitovy, 3,6 cm fotsiny
Ny sakany dia ampidirina ao anaty tontonana anatiny amin'ny vatan'ny kabinetra, maodely mazàna. Ny andiany 4835 dia mety amin'ny fampiharana ara-barotra, indrindra ireo fivarotana kiraro sy trano fisakafoanana. Rindrambaiko fihaonambe sy fivarotana antsinjarany ary koa rindranasa fonenana. Ny fantsom-pahitalavitra dia manana akorandriaka misy frosted izay manome lumens 750 isaky ny tongotra amin'ny safidy 3000K na 4000K. Ny mpamily tafiditra dia azo ahena amin'ny fifehezana 0-10V, mety amin'ny fampiharana 120V ka hatramin'ny 277V.
Rehefa mividy jiro mivantana LED, ny fikarohana Google haingana fotsiny dia hampiseho aminao ny lisitry ny safidy lava. Ireo safidy ireo dia manamora ny fahafahan'ny mpanjifa manavaka sy manitsy ny safidiny arakaraka ny filany. Satria ireo jiro ireo dia azo ampidirina, apetaka, na miafina mihitsy aza, dia azo ampiasaina amin'ny toerana vitsivitsy ivelan'ny trano sy ny birao, toy ny metro, sidewalks, gym, seranam-piaramanidina, ary sehatra ambanin'ny tany amin'ny lamasinina.
Ity jiro LED ity dia jiro 3.6cm miverina miverina eo an-damosina, izay ampiasaina ao anaty takelaka hazo.
Na dia mitazona ny hazavana avoakan'ny hazavana aza ianao, dia misy taratra fitaratra tsy vita vita amin'ny aliminioma nohosorana avo lenta mba hanitsiana ny fizarana hazavana sy hanitsiana ny famirapiratan'ny jiro.
Teo aloha: RCL-2720 hazavana LED tariby miverina miverina
Manaraka: RCL-0810 Fitaovana hazavana LED ambany nitaingina ambany